Millennials noXolelwaniso Racial — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Nangona mna ndicinga ukuba Lipholile nomhle, Andiqondi ukuba njengoko Nakuba abanye phandle ukuba. Yonke imihla kukho iikonsathi njengalo lonke ilizwe. Akukho nto yayahlukile ukufumana iintlobo ezahlukeneyo zabantu ukuba abahlanganisele ndawonye. Yenzeka lonke ixesha eekonsathi, iziganeko okanye zezemidlalo, etc. Xa igcisa okanye iqela lezemidlalo usembindini ingqalelo, abantu balapho ziziswa ndawonye kukuthanda kwabo ukuba umculo okanye iqela. Abo bantu awunalo ngenene kumanyana. Ke musa ngenene ukuba ukuvana. Kufuneka nje ukulunyamezela bethandana iiyure eziliqela.
Loo nto ke uhlobo umanyano noxolelwaniso ukuba sele emva. Ukuba uhlobo umanyano buyaphela. Oku ongavelisi nantoni. Aba bantu àbakhonzi ngokwenene omnye komnye. Kwaye ngokwenene ungambonisi uzuko Kristu yeVangeli wakhe ngendlela efanayo.
Uhlobo nomanyano sele emva kuthabathe ngakumbi substantial- onothando nangakumbi.
Uhlobo nomanyano sele emva na kuvezwa kwiimfuno nje eqhelekileyo zomculo okanye zenkcubeko. Uhlobo nomanyano sele emva ezinokulinywa kuphela iVangeli kaYesu.
Kwaye ukuba kunjalo le nto uthetha ngayo yeVangeli noxolelwaniso ngokobuhlanga, nje noxolelwaniso ngokobuhlanga.
Phawula la mazwi ngoYohane 11:
..., Waprofeta ukuba uYesu uza kulufela uhlanga, kungabi ngenxa yohlanga olo lodwa, kodwa ukuba abahlanganisele ngenxa yabantwana bakaThixo abalusali.
Nantso uhlobo umanyano siza emva:abantu ezininzi ezahlukeneyo wonke umntu abe.
Injongo yethu isiphelo nje ukuba abantu abamnyama nabamhlophe kwigumbi elinye. Jay-Z ukwenza ukuba. Injongo yethu kukuba ukuvakalisa uxolo nomanyano ukuba uYesu asele ezenzile Ebizele abantu UKUBA. Sifuna abantu banandiphe bokuzala apho livakalise zonke iindawo abahamba. Yaye sifuna ukuba wonke sizukulwana. Kodwa enokuza kuphela yeVangeli.
Transition: Isizukulwana Lweminyaka na kunjalo azalelwe 80s ekuqaleni ukuya kowama-2000. kwaye thina (millennials) alungile ngelo kuqala, uhlobo lula umanyano. Kodwa kuthekani ukuba ngakumbi, olukhulu ngakumbi, kunye nohlobo nzima ngakumbi umanyano?
Ukuba wemileniyam njengam, ngoko ndifuna ukuba siqwalasele iindlela kuqhubeka ukuba anilwele uxolelwaniso. Ukuba awunguye umntu wemileniyam (aka nguwe omdala), mhlawumbi unako qaphela ukuba kubiza millennials kulo mbono mkhulu yezibhalo. Ukuba uya kuba fundisi, amalungu ecawa, abazali, abahlobo, etc.
Kukho ezinye iingxaki ukuba ucinga uxolelaniso ngokobuhlanga esi sizukulwana. Kungabi lula ukubiza abantu zombini ukuze zingqinelane zize zibakhuthaze ukuba kubiza abanye efanayo. Nazi imiqobo ezintathu eyodwa Ndicinga esinayo ukubizela millennials kule:
1. Ezinye millennials bacinga ingcinezelo ngokobuhlanga ingxaki nootatomkhulu bethu.
Kunjalo izinto zahlukile kakhulu ngoku kweli lizwe kunokuba kwakunjalo. Utatomkhulu wam uye wandixelela amabali ukuba Andiyikholelwa,ubawo ndaqononondisa ngexesha butho yamalungelo, kunye nomama wam undixelela amabali ukukhumbula ukuba amagumbi ehotele wakhanyela njengoko abe child.Those awuyifumani amava am. yocalulo okusemthethweni asiyo ngokwenene. Ke iimpahla iye yatshintsha.
Ngoko ke, abaninzi bethu sicinge ukuba sibe kwixesha ezahlukileyo kwaphela kwezo, leyo eyenza ubudlelwane ugqatso akusekho incoko efanelekileyo. Omnye rapper wathi, "Akukho ubuhlanga kunye Internet. Ubuhlanga kuphela-ukuba izizukulwana mhlawumbi ezifana emihlanu edlulileyo ... Ubuhlanga kuba-andinakuthi izizukulwana. yeah, izizukulwana ezifana emihlanu edlulileyo. Ubuhlanga singaphezulu. Ntombikayise abantu abadala ukuba siqhubeke nokuwugcina ... "
Le nto millennials abaninzi bacinga .... "Sicela ngoku uluntu post-ngokobuhlanga. Zininzi imitshato ukutshatana isizukulwana yethu. Kwaye kunjalo soba ngumongameli abamnyama. Yinto zonke ngaphambili. "
Ngelishwa, amaphononongo lwakutshanje lubonise ukuba millennials khawunikele lweenkonzo oluninzi ngomlebe ukuya ukulingana kunezizukulwana elidlulileyo, kodwa sibe nangoku imvakalozwi kanye njengoko ucalucalulo njengoko abazali bethu. kanti, sicinga ukuba sele post-ngokobuhlanga, leyo ludibaniso yingozi.
Kanjalo, iziganeko zakutshanje andifani eziculwayo zobuhlanga phakathi Oklahoma cisa zibonisa ukuba ubuhlanga uyaphila kwaye kakuhle kwisizukulwana sethu. kodwa okubuhlungu kukuba, ngaphandle kokuba loo ubuvuvu, ubukho bayo siyamkhanyela.
ucalucalulo ngokobuhlanga kudla ezingaqondakaliyo, kodwa loo nto ayithethi ukuba ngaphantsi sisono. Oku kuthetha ukuba sneaky ngaphezu phambi. Ke ukuba unako ukwenza kube tricky ukulwa.
2. Ezinye millennials bacinga umsebenzi eendaba zentlalo kwanele.
eendaba Social kusisipho eningenakukholwa. Siye Nindibonile mngeni eendaba zentlalo kwaye ihlanganise abantu ekukhanyeni imiba zakutshanje ngokobuhlanga U.S. Kodwa isizukulwana sam lula kuwela kumgibe ndicinga ukuba kwanele ukuba ngokulula abanye izinto ezilungileyo ku loluntu sasazo. Abanye abantu bayibiza nikunqena-tivism:ukuba utwithe namatsha, kuchaphulo abashumayeli ', kunye nezithuba blog kule miba, kwaye uyeke khona.
Oko akwanelanga! Kufuneka athabathe amanyathelo ngaphaya. Ukuthetha ngale intanethi okanye phakathi abahlobo bethu yinto entle kakhulu, kodwa oko akwanelanga. Nokuba ubuhlobo eendaba zentlalo kunye nezinye ethnicities neenkcubeko kulungile, kodwa ngokuqinisekileyo akwanelanga.
3. Ezinye millennials musa ukucinga ukuba iLizwi likaThixo kwanele namhlanje.
KumaKristu wemileniyam, siphila ngemini apho iBhayibhile asihlonitshwa njengoko obefudula. Kwaye ngenxa yokuba, ukuzithemba kwethu eBhayibhileni ngokomfuziselo wokunciphisa. kaGqirha. mini yokumkani, abantu basabela kwinyaniso yeZibhalo, kodwa hayi ezethu. Yinto nomabi. Bathi yinto yemvelo ukuba ngokwenene kufuneka yinto eyahlukileyo, umyalezo ebandakanya ngakumbi. Kwaye umyalezo ekucingwa ngayo ukwenza umahluko wokwenene nayiphi ay?
Akuyomfuneko ngaphezulu isibhengezo yeVangeli zamaKristu, ezininzi Nithi. Ukuya ku, si ku funayo njengokuba inyathelo umKristu xa bevakalisa yeVangeli na isenzo. Simele sihla- ngaphezu eshumayela, kodwa ngeke ungamshiyi eshumayela iVangeli, okanye siyakuba kuphela uhlobo umanyano ukukhanya kokomzuzwana sasincokola ngasentla.
kakuhle, abo imiqobo ezintathu Ndicinga sijongene ubizo millennials kuxolelwano ngokobuhlanga. Ngoko ke, Ngoko yintoni esimele siyenze? Ukuba iinkokeli zecawa okanye amalungu amabandla okanye abazali, siya kuqwalasela njani oku kubomi isizukulwana sam?
Nazi izisombululo ezintathu ezilula. Ndicinga nganye kwezi dilesi zonke zontathu ezi ngxaki zichazwe ngentla. Kwaye eyona nto ndifuna cinezela ekhaya kukuba kuphela yeVangeli uvelisa uhlobo umanyano siza emva.
isisombululo #1: Kushumayela iVangeli noXolelwaniso
Ndiyazi ukuba izicacele, kodwa kubalulekile kakhulu ukuba bagqibe waza wakhangela phezu.
Ndiye nje ndafudukela Atlanta ukunceda utyale ibandla elitsha, kodwa ngaphambi kokuba ndibe kwi abasebenzi kwicawa D.C. kwaye ilungu khona iminyaka emine. Ngeli ixesha lam apho, Ndabona ibandla ukhule wanda ngendlela ezahlukeneyo, kwaye yinto entle ukubona. Kwakukho amalungu ngakumbi abamnyama, amalungu Chinese, amalungu amadala, kunye namanye amalungu. Ukuba kakhulu ukubukela nokubhabhatizwa apho kwakukho esi ukwahluka crazy phakathi kwabantu bakaThixo elalindisindisa.
Oku akuthethi iyantlukwano egqibeleleyo, kodwa kwakukuhle. Kwaye ndicinga ukuba kwenzeke, kuba ibandla wachitha ixesha lethu uthetha uxolelaniso ngokobuhlanga, kodwa ngenxa yokuba wachitha ixesha lethu uthetha kanye umyalezo loxolelaniso.
Kutheni kwenzeka iyantlukwano?
UYesu uthi ku Johane 12:
Koda mna, xa ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni, ndiya kubatsalela bonke kum
UYesu wathi xa uye waphakamisa, intsingiselo xa abeza kufa emnqamlezweni, uya kubatsalela bonke abantu kuye. Akazange athi ezinye iintlobo zabantu, kodwa bonke abantu. Yena ayicaluli apha. Xa Umpostile uYohane usebenzisa igama elithi "zonke,"Oko akuthethi kuthi wonke umntu ongatshatanga, kodwa amaqela bonke abantu. Ngaphezu kwaSirayeli nje, kodwa zonke ezinye iintlanga ngokunjalo. UThixo wadala abantu abohlukeneyo, kwaye uYesu wafa ukuzoba izizwana ezahlukeneyo kuye.
Oku intliziyo incoko yethu apha. Into eyahlula sibe sisono. Ingcambu zobuhlanga uxinezeleko ngokobuhlanga ukungcola ngokobuhlanga sisono. Kwaye uKristu sele kusetyenzwa isono ngesibetho ukufa ngenxa yabantu bonke. Kufuneka avakalise ukuba umyalezo.
kungenjalo, siza ukuchitha ixesha lethu uzama ukwenza uhlobo olwahlukileyo umanyano kunokuba amkele umanyano uYesu sele. isityhilelo 5 uYesu uthi, "... Zithengelwe uThixo abantu bephuma kuzo zonke izizwe, ulwimi, abantu, neentlanga. "Oku kuye icebo likaThixo zonke ndawonye, kwaye sifumana sichazele!
Kazi ukuba bendikhe ukuthembela ngaloo umyalezo entsimini yakho. Yinto isixhobo yethu iphambili.
YeVangeli umanyano alupheleli kakhulu kunokuba abaninzi kuthi bayaqonda. kwi Efese 4, UPawulos athetha ngalo umanyano olunzulu. Qaphela onke amaxesha usebenzisa igama elithi "omnye."
Kukho umzimba mnye, mnye noMoya-kanye njengoko nina nabizelwa ithemba enye bobabo umnxeba-nye yakho iNkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, Mnye uThixo, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, yonke. Efese 4:4-6
Yiloo nzulu kakhulu kunezinye umanyano siza kusetyenziswa. Kwaye yeVangeli iyafuneka ukuze axolelanise kuthi ngaloo ndlela olunzulu.
Thina millennials bafuna enye iVangeli wonke umntu owenza. Kwaye uvelisa umanyano lokwenene. Ngoko ke, ke kuqhubeka uyithembe yaye evakalisa kuyo, nokuba inkcubeko yethu akafuni ukuva. Kwi kwinkcubeko, sifuna ukubona umthetho, kwaye sifuna ukubona ubulungisa. Kodwa ke ukulibala ngoko uMgwebi wabo bonke sele bawisa.
iVangeli kuphela ukwenza olu hlobo umanyano. Kulungile, ke ngoko into nezinye izisombululo kukho ngaphaya isibhengezo nje?
isisombululo #2: Lwelani yeVangeli uthando kunye nokuqonda
Sicela iqheleke kakhulu amazwi kaYesu kuYohane 13.
Khangela uYohane 13:34-35. "A umyalelo omtsha ndiya kukunika: Nothando omnye komnye. Njengoko ndinithandileyo mna, ngoko kufuneka nithandane. Ngayo le nto baya kwazi bonke, ukuba ningabafundi bam, ukuba nithandane. "
Kodwa oku kuthetha, yaye esi ngokwenene kanje? Olu thando athetha ngalo apha yena sinomsa engcwele umntu kunye nokuzinikela lokungazingci zabo ezintle. Sifanele sibe ukuba uthando engcwele omnye komnye. Kufanele Sizimisele okulungileyo omnye nomnye. Sifanele sifune omnye komnye ukwazi uKristu ngaphezulu, zikhula, baze baphumelele. Yonke intsebenziswano esinalo omnye komnye kufuneka kubalulwa luthando.
Kodwa uYesu akazange athi uthando omnye komnye; acacisa ukuba nothando omnye elelomnye. njani: Kanye wasithandayo yena. Wowu! Waba lihlwempu ngenxa yethu, nanyamezela nesono hlabathi kuthi, waza wabeka ubomi bakhe ngenxa yethu. Kwaye ithi uthando omnye komnye ngendlela efanayo. Kwaye yiloo ndlela abantu baya kwazi ukuba abafundi bakhe.
Lo sithandane fleshes ngokwayo ngaphandle ngeendlela eziliqela. Eseleyo iTestamente Entsha ubeka kancinane kodwa inyama ekhangeleka le nothando.
Galati 6:2 – omnye zeBhere somnye imithwalo
Efese 4:32 – Yiba novelwano omnye komnye
Filipi 2:13 – ekuthini nguyena kunawe
Hebhere 3:13 – ukukhuthaza omnye komnye yonke imihla
James 5:16 – nithandazelane
1 peter 3:8 – Uthando njengoko abazalwana
Nantso uthando esinzulu.
Musa ukungabahoyi inxalenye ngubani mna
Nantsi into, ukuba uhamba ukuba nithandane, kufuneka besazana. Kufuneka baqondane. njani kuthwala umthwalo umzalwana wam, ukuba andithanga ndiyazi into imithwalo yakhe? njani mna ndibe nemfesane kuni, ukuba andithanga ndiyazi ingcinezelo ezingumthwalo kuwe? Ukuqonda ngamnye omnye kusinceda sithandane kakuhle. (phinda)
"Andazi nokuba ndinibone lumnyama."
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, Mna zindihambela incoko umhlobo wam okhoyo ukuba white.We zaye zindihambela athambileyo wobuzalwana uhlobo uthando mzuzu. Wathi yena kum, "Kum, wena nje Uhambo wam umhlobo. Andazi nokuba ndinibone zimnyama. "Ngoku ndiyaqonda ukuba wayezama ukuthetha kum. Yena kwakungazi kundithanda ngaphantsi na ngaphezu kwezinye abahlobo bakhe. Kodwa kwelinye icala, Ndicinga ukuba yeyona ndlela akalulo ukujonga abanye. Bekuya kuba kum lisithi omnye wabahlobo bam enye, "Uyazi ndibona nje njengoko Johnny. Andiqondi nokuba qaphela ukuba sele enye. "Kulungile, yena omnye. Kwaye abaninzi bomzabalazo bakhe, iminqweno, kunye nemingeni Niza kuba nento yokwenza yokuba yinto enye.
Yaye ngoko wakhuthaza abahlobo bam ukuba ucinge ikakhulu malunga bumnyameni yam lonke ixesha uthetha abam kodwa ukuba ngathi ngathi akukho apho. Ngenxa yokuba eli, kwaye iyayichaphazela ubomi bam.
1. Ngokuba mna abamnyama. Ndithanda ukuba abamnyama. UThixo undenze ngale ndlela.
2. Kukho amava eyodwa wona ngoku abamnyama, okanye ukuba umfundi, okanye umama, okanye enye.
Amava am abamnyama
Abanye bethu musa ukuba ucinge nobuzwe bethu kakhulu ebomini bethu bemihla ngemihla. Nokuba ilungile. Kodwa kukho nabanye ukuba benze. Ke mna ndithetha nje mna kunye namava yam abamnyama. Andikwazi ukuthetha, ngokuba wonke umntu.
Kukho uxanduva chatha ukuba, kwaye abantu abaninzi abamnyama, ukuba uwuthwale. Siya kuthwala umthwalo lokwazi imbali kwingcinezelo kwilizwe lethu: ukuba abantsundu abukhange buthathelwe abantu ezipheleleyo, ukuba amanye amanani kwimali yethu phantsi abantu abamnyama ezifana ipropati, ubuhlanga esazi isekho, kwaye emva kokwenzelwa lobuhlanga ngamanye amaxesha.
Ukwazi oku guqula indlela uyamthanda umntu.
Kukho amaxesha amaninzi xa sele ekucingelwa ngam izinto(ezingeyonyani) nje esekelwe inkangeleko yam. ngezihlandlo ezininzi, loo nto Kuqikelelwa ukuba mna ndingumntu whenI lolwaphulo ayinakuba engaphezulu evela kuloo. ngezihlandlo ezininzi nto Kuqikelelwa ukuba mna ungathethiyo nabangafundanga. ngezihlandlo ezininzi nto Kuqikelelwa ukuba mna obuphantsi oontanga bam ezimhlophe okanye andifuni njengoko kulungile. Ke abantu bacinga ukuba aye wayenza yacaca kum. Ukuba ukukhankanya abantu isalathisi abo endibathandayo ngeendlela ezenzakalisayo. Kanye ukuva abantu bathi, "Udade yakho kinda intle, kuba intombazana emnyama Ndiya kuthetha. "Ke ukuba abamnyama lingaphantsi entle. Kukho beli ebomini bam kubomi ezininzi. Ndiza kufuneka ukuba intetho kunye nonyana wam, kanye kanye utata wam nam, omlumkisa ukuba alumke yaye ukuba kukho abantu akayi ungathanda kuba nje nguye abamnyama. Kwaye luxanduva chatha ukuba kufuneka bathwale.
Kutheni amava umcimbi?
Kodwa kutheni le nto? Kutheni Nam andinixeleli ukuba konke oku? Ngenxa loo myalelo ukuba nithandane. Kanye uyamthanda umama wakho ngendlela eyodwa, namadoda akho, okanye abantu abangathathi-ntweni, umele umthande ethnicities ezahlukeneyo ngeendlela ezizodwa. Thina kubavuyisa eyodwa, imithwalo, kunye namava, kwaye awukwazi umthande abanye kakuhle ukuba ndabandulula okanye ngoyaba amava zabo ezizodwa.
Ndikhumbula ndithetha udade Chinese lowo joyina icawe yethu. Ebene- kuphela States ixesha elifutshane, kwaye yena wathetha eyenzeka kuyo iintshumayelo, cacisa kube nzima ngayo ukuba ukulandela. Andizange kwakuza wacinga ukuba ngokunzulu ngenye. Oku ngokupheleleyo yatshintsha indlela ndilolonga amava oodade abafana naye ecaweni yethu, yaye oko kwandinceda ukuba bacinge ngenyameko malunga nendlela ukuba sibathande.
iVangeli kuphela ukuvelisa olu hlobo thando. Ngoko ke, simele sibuyele emva kuYesu ukuze bayixube kuthi. Kuya kuba nzima, leyo ezisa ukuba ingongoma yam yokugqibela.
isisombululo #3: Musa ukucinga kulula
Ukwahluka ibonisa ubuhle nenyaniso yeVangeli. Xa kufika umntu ecaweni yethu, balibone ukwahluka-uhlobo kweyantlukwano abayiboni ehlabathini-ibanika akrotyiswe ubuqaqawuli yeVangeli. Isibhalo sithi nabani na othe wabiza igama leNkosi uya kusindiswa-hayi nje elinye iqela labantu-kwaye yinto entle xa oko unako ukuze sibekwe kwindawo iqumrhu.
Ukwahluka wenza izinto nzima
Yezimeko into entle; kodwa kungabi lula. Wonke ecaweni-nokuba abantu ye ubuzwe efanayo, ubudala, background- liqwalasele kuba siza aboni. Kodwa iyantlukwano kunokubangela imiba yayo eyodwa. bonke Sizisa aneemvelaphi zethu, amava, presuppositions, ucalu, bengxwelerhekile kunye nathi. Kwaye ngamanye amaxesha ukuba kudala ungquzulwano.
ISibhalo ayikho wayengayazi le ungquzulwano. Nkqu ibandla yokuqala, kukho iyantlukwano kuzo ngokwahlukana ngokobuhlanga (njengoko kubhaliweyo kwiZenzo). Ngoko ke, kuba iya kuba nzima, apha iincam random ukuba asebenze njani ngabo ubunzima:
Tips Iluncedo noXolelwaniso yobuhlanga
1. Musa ukunyanga abantu abangafaniyo ngokwahlukileyo kakhulu.
iiyantlukwano zabo eyona nto. Kufuna ukuqonda ukuba, kodwa nonxibelelwano kunye nabo ngokuqhelekileyo. Ndiya uyazikhumbula ixesha xa wabuyela ELIBEKA, xa unjingalwazi kusoloko ukuthetha kum eyahlukileyo. Wayeza ukubulisa abanye abafundi kunye, "Mholo ngalentsasa,"okanye, "Good ukukubona." Kodwa wayeza kubona mna yonke nokutsho ngesiquphe, "Kwenzekantoni inja?"Okanye" Kuqhubeka ntoni indoda yam?"
Wayengenako wayezazi umahluko yam ndiye ngaphandle uziva ngathi kwakufuneka ndithethe nam ngendlela eyahlukileyo.
2. Musa ukucinga iingcinga.
amaqela kweentlanga, amaqela yobudala, etc. zenziwe ngabantu. Amava abantu abangafaniyo. Ezinye iingcinga uyahlekisa nibe, kodwa abanye ekhubekisayo. Fumana ukwazi ngamnye njengoko umntu.
3. Zama zithontelane kuphela nabantu abangathi onjengawe.
Ngabom ukwakha ubuhlobo nabantu musa khangela njengani. Silwe isilingo ukuchitha ixesha kunye abantu nawe ezininzi zendalo kuza kudibanisa kunye. emva ecaweni, ngabom ukuthetha nabantu abahlukileyo. Njengoko isabelo, kodwa ngenxa yokuba isipho emzimbeni kanye njengabo abantu abafana Okukhona.
4. Ngabom kufuna ukuqonda abantu.
Yiya nzulu relationally. Buza imibuzo. Mamela ngononophelo kwaye kuvelana amava abantu eyodwa. Nokuba sele beluthandabuza into umntu uthi, ngaphambi awukhuphe, ukubaphulaphula kufuna ukuqonda
5. Banyamezele ubunzima kunye ndikhula.
Yezimeko kunzima, ingakumbi xa uqala sithetha ngokobuhlanga / nobuzwe. Ezinye ncoko Ungafumana langoku. Ndibabale omnye nomnye. Soloko acingele eyona hayi ezimbi. Xa umntu efuna ukuqonda ukuba uyakuxakanisa, Ndibabale nomonde nabo. Bazama. Musa ukubeka iindonga aze kwenza kube nzima ukuba abantu bafumane kufutshane nokuqonda. Yinto esitalatweni indlela-amabini.
Xa efuna ukuqonda umntu, musani ukoyika ukubuza imibuzo okanye athethe into engalunganga. Kufuneka ukhethe amazwi akho ngononophelo, kodwa ke kuya kufuneka ukuba ukuthatha ingozi kwaye silindele abazalwana noodade bakho ukuze anibabale.
Musa ukunikezela xa kunzima. Oku kukhokelela iyantlukwano nje nomonde endaweni kweyantlukwano emanyeneyo.
6. Uzibuze ukuba uyazazi zonke iintlanga ezinye / kweminyaka / amaqela eyentlalo.
Loo mbuzo simele sonke ukuba sizibuza oku. Umsebenzi ukuba bacinge lweBhayibhile / ngokwanelisayo. Sonke kufuneka ngokuthandabuza indlela esicinga ngayo abantu abangafaniyo ngaphezu kwethu, kuquka ezahlukeneyo ngokwenkcubeko kuhlale. Yintoni ethi qatha engqondweni yakho xa Kwathi umntu esitratweni? Yintoni ethi qatha engqondweni xa ubona kubo evenkileni? Kufuneka imibuzo size sizame ukubona abantu ngendlela uThixo uyababona.
7. Gcina incoko.
Oku kufuneka kube yenye iincoko ezininzi. Oku akuthethi ndingade ingxoxo ebanzi. Oku kwakuthetha ukuba ukuqala ezinye iingxoxo. Umanyano noxa akuthethi kwenzeka ngengozi. Ke ukuba ndandingathethi ngako, akayi kuba bazazi thina kusebenzela kuyo. Isabelo neenkxalabo kunye nomzabalazo, likukwaphuka ukuze uqinisekise ukuba ezi ncoko yimfesane, ubuntununtunu, ufefe, kunye nothando.
Ukuba ngaba kuthetha ngayo, thina Ndingena ingozi aqhubeke sicinge ukuba le ngxaki sele ekuxoxwe ngazo ngaphambili. Xa iingxaki kukho, kodwa siza abazazi, loo nto ifana iingxaki zombane endlwini yakho. Wena ingavuka ngenye imini ukuba umlilo! Kufuneka bazi ukuba ngokwaneleyo ukulwa kakuhle.
8. Camngca isibhalo ukhunge kuThixo uya kukunika amkhanuke umanyano.
Umanyano ibitheni, ngoko sifanele sithandaze ukuba uThixo uza kukhula nothando lwethu kuba. Siza umthetho ukuba banasicamango sinye. Siza umthetho ukuqonda ubunyani ukuba sibe mnye kuKristu. Oku ayilogama kwadalwa. Jonga Efese 4. Jonga izithembiso zikaThixo zehlabathi kuAbraham kwiGenesis. Khangela indlela konke siphele kwiSityhilelo. Ukhunge kuThixo kukunika ukuba amkhanuke olu hlobo umanyano.
kodwa, njengoko itno besiyithethile amaxesha amaninzi sele, kuphela yeVangeli inokuvelisa olu hlobo thando nomanyano.
Sifuna abasebenzi ukuba lo yeVangeli ziyaxhonywa ukuze ihlabathi ukubona.
Kwixesha nexesha ebonakala alwayo ngakumbi, iNkosi ungasebenzisa oku. ILizwi likaThixo kwanele. Nabantu bakaThixo bafana umzekeliso usebenzisa ukwenza yakhe kwithafa iLizwi likaThixo. Enye Usebenzisa ukwenza iVangeli yakhe kukhanye ngakumbi.
Hayi abamnyama nje nabamhlophe kwigumbi elinye, kodwa abamnyama nabamhlophe entsatsheni efanayo.
ukuba nzulu, umanyano truer.
Michael • UTshazimpuzi 9, 2015 ngexesha 11:47 mna • impendulo
Ezinye iingcinga kakhulu apha. Ndimhlophe, kodwa waya kwisikolo samabanga aphakamileyo yaye badlale ekhatywayo phantse yonke guys omnyama. Ngoko ke, Mna ngokuqinisekileyo-mbalwa esikolweni yam (kwaye ukuza kuthi ga kwi ilokhari-igumbi). Ekhulela e Arkansas-Missisippi Delta, ukungakhululeki uhlanga baba (yaye kusenjalo) ekunene phezu. Usoloko usiva ezingakhiyo ezivela macala omabini malunga nezinye. Yinto lusizi. Yintoni nzima wenziwa ecaweni ngokohlanga yakho ngokuzama ukuba ukufikelela ku ugqatso olungaphesheya. Ndibone isandla yokuqala indlela ubuhlanga na yokukhulisa ukuba intloko elibi ecaweni. Yinto embi. Ndiyambulela for guys njengawe, uhambo, abakulungeleyo ukuzama nokujongana nale miba ngokwembono ivangeli-based. Siye sicelwe ukuba ungamthandiyo umzalwana wethu, enoba kwenzeka ntoni ibala umzalwana wethu ukuba abe. Ndilangazelela mini ukuba kukho amabandla multi-calulo phesheya Delta. kodwa, kuphela kwendlela uzakufumana ukuba kukho ngokufuna ukuba baphile ngaphandle ezilungileyo yonke imihla nokuba ngabom ngokwenene ngayo.
Robin • UTshazimpuzi 9, 2015 ngexesha 3:12 pm • impendulo
Thanda Oku, uhambo! Ingunonca xa ndaqalisa ukhokela nongqamaniso isangqa ngokobuhlanga yaye ukuba abafundi bakho angathanda ezithile zekharityhulam free, zingaya le sayithi ukulayisha http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
Uthando oko wakuthethayo engafuni ukukhathaza ukungafani kwethu isiseko isibhalo umanyano!
“Hayi abamnyama nje nabamhlophe kwigumbi elinye, kodwa abamnyama nabamhlophe kwintsapho enye.” AMEN!
KwasiAgbottah • UTshazimpuzi 9, 2015 ngexesha 3:23 pm • impendulo
Ilungile kakhulu. kwakudingeka. So eluncedo. Ndiya kusebenza ezi zinto. Enkosi.
Rolfstlund • UTshazimpuzi 10, 2015 ngexesha 6:47 mna • impendulo
Ndiye ndathi phambi – Trip Lee unishumayeza elungileyo yaye uyenze ngendlela frank, indlela elula ayinyaniso …. babusisiwe !!!
UDamien • UTshazimpuzi 30, 2015 ngexesha 4:28 pm • impendulo
Outstanding, sikubeke kucace.
Otis • Isilimela 27, 2015 ngexesha 8:39 mna • impendulo
Namhlanje lixesha yam yokuqala kule lewebhu. Ndiya kulandela Trip umculo lee malunga 3years mandulo Lecrae. Ndiyabulela kuThixo ngenxa yobomi bakhe kwaye i basandul lo iimfundiso. Ndihlala e Ghana apho 99% bethu abamnyama kodwa ingxaki yethu apha ngaphezulu yohlanga.(akukho zobuhlanga e Ghana nangona abakhenkethi.) I kwakuthetha ezinye abonwa ” abantu ilungile”. Ndiye ndafunda alot kule mfundiso leyo eya kusebenza mna ebomini bam ngemihla. Siyabulela uhambo uThixo anisikelele.
igama • EtiMnga 14, 2016 ngexesha 3:39 mna • impendulo
hello, umhlobo ubheka !
x • UCanzibe 14, 2017 ngexesha 10:13 mna • impendulo
Ndiye ndizame looknig sesithuba efana nale ngonaphakade (kunye nosuku)
Mwiza • EyoMqungu 1, 2017 ngexesha 2:51 pm • impendulo
Ukufundisa Uhambo Great. ndiyayithanda. (Zambiya)
Olivia • Isilimela 18, 2018 ngexesha 12:32 mna • impendulo
Ndiyawuthanda lo ncoko nokufundisa. I nje waba incoko efanayo kunye nabantwana bam abathathu. Ndiza kusebenzisa eli nqaku ukubethelela njani ukuba siyamthanda njengoYesu. Ndinombulelo kuba Trip abahlala ngaphandle ezilungileyo nokufundisa abanye ukuba benze okufanayo. UThixo anisikelele nonke.